Codkawaamo.com » Askari u dhashay Uganda oo lagu helay dambi ah inuu rasaas ka iibiyay Wiil Soomaali ah
Askari u dhashay Uganda oo lagu helay dambi ah inuu rasaas ka iibiyay Wiil Soomaali ah May 11, 2012 - Comments off	Askari ka tirsanaa ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya ayaa lagu helay dambi ah inuu ka iibiyey wiil Soomaaliyeed rasaas.
Askarigan oo lagu magacaabo Mubarak Magiri ayaa guddi dhinaca Anshaxa u qaabilsan ciidamada AMISOM waxa uu ka hor qirtey in uu ka iibiyey wiilkaa Soomaaliyeed illaa iyo 35 xabo oo rasaas ah bishii March ee sanadkan.
Askarigan ayaa lagu xukumay hal sano oo xabsi ah waxana laga eryey ciidamada kadib markii uu ceeb u keenay ciidamada Uganda isla markaana ku kacay falal uu ku qiyaanay qalabka ciidan ee lagu aaminay.
Hase yeeshee askarigan ayaa racfaan ka qaatay xukunkiisa isagoo haatan ku sugan dalka Uganda sida ay daabacday allafrica.com. hase ahaatee lama shaacin in wiilka uu ka iibiyey askarigan rasaasta uu xiriir la leeyahay ururka Alshabaab oo sida xoogan ugaga soo horjeeda joogitaanka ciidamada AMISOM ee dalka Soomaaliya.
Balse maamulka milatariga dalka Uganda ayaa sheegay in askarigan xukunka lagu riday uu ahaa mid qafiif ah oo aanba ku habooneyn in lagu rido askari dambi sidaa oo kale ah gala.
Qareen u doodeysa askarigan ayaa waxaa ay sheegtay in aysan ahayn in askarigan la xukumo maadaama uu howlo ku jirey.
Askarigan ayaa fadeexada uu ku kacay waxa ay tahay mid ceeb iyo sharaf dhac ku ah ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya.
Waxaana arrintan soo shaac bixideeda ay ku beegantay xilli marba marka ka dambaysa la soo kordhinayo tirada ciidamada AMISOM ee dalka Soomaaliya.
Si kasta ha ahaatee ciidamada AMISOM ayaa hore dhowr jeer waxa ay uga cawdeen in aan la siin mushaaraadkooda.
Waxaana shalay kulan ka dhacay dalka Kenya lagu sheegay in ururka Midowga Yurub uu kordhinayo lacagaha uu ugu deeqo ciidamada AMISOM maadaama haatan la soo kordhiyey ciidamada nabad ilaalinta ee ku sugan dalka Soomaaliya.
« PreviousXukuumadda oo heshiis Is-afgarad ah la saxiixatay hay’adda Xuquuqul Insaanka ee QM	Next »GAROOWE: Islaan Haashim oo lagu marti qaaday Baarlamaanka Puntland	Sheikh Shakuul oo sii labo laabay ololahiisa musharaxnimada Daawo DAMAASHAADKA JIMCAHA EE XEEBTA KISMAAYO -LIIDO	Abwaan Ali Dhoof iyo gabaygii uu ugu jawaabay seefta banaanka	Ali Siciid NacNac, oo ka hadlaya adeegga cusub ee shirkadda Xawaalada Tawakal Kullankii Xisbiga Waamo Ind.Poeple ay ku qabteen Nairobi Kenya Miyaad garaneysaa dadkii ugu horeeyay oo deegaan ka askumay magaalada Wajeer-Kenya	Daawo Geela Australia oo la iska laanayo halka annuna isku layno	Daawo Ugaas Aadan M.Hussein “Boqow” oo ka hadlay masiirka Gobolada Jubbooyinka	Dugsiyada Galdogob & Galkacyo daawo Daawo saxiixayaashii shirkii Kenya ee 2002	SOO DHAWEYNTII MUDANE Ismaciil X.WARSAME	Marna waa Faturad Marna Waa Diyaarad	Daawo doodii Royal TV.ay u qabatay Reer Waamaha UK.	Hareri iyo Hargeysa	Areey Xaa kuu baxay	CILMI BOODHARIO IYO JACEYLKIISII HODAN	Search for: